ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင် ရှိ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
Get Properties in Myanmar By Email
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်၊ (၄၄)လမ်းတွင် (600Sqft)အကျယ်ရှိ တိုက်ခန်း ရောင်းမည်။…
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၄-လမ်းတွင် မိသားစုနေထိုင်နိုင်သော (600Sqft)အကျယ်ရှိ ၇-လွှာ၊ Hall, Lift, A/C-1, ပါရှိသော ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအာ…...
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၄-လမ်းတွင် မိသားစုနေထိုင်နိုင်သော (600Sqft)အကျယ်ရှိ ၇-လွှာ၊ Hall, Lift, A/C-1, ပါရှိသော ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းအာ…
Listed 21 December 2018
Property ID: S-1184025
Asking Price : 699 သိန်း
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် 46 လမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး…
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် 46 လမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းမည် Size - ( 25 - 60 ) '6- Floor ရိုးရိုးအိပ်ခန်း…...
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် 46 လမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းမည် Size - ( 25 - 60 ) '6- Floor ရိုးရိုးအိပ်ခန်း…
Listed6December 2018
Property ID: S-1180985
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ပေါ်ဘလောက် (၄၈)လမ်း အမှတ်(၁၅၅/၁၅၇)ရှိ…
ကြွေခင်း,Overhead Tank,Own Meter,New Elevator,Own motor,Power and lighting Line...
ကြွေခင်း,Overhead Tank,Own Meter,New Elevator,Own motor,Power and lighting Line
Listed5March 2018
Advertiser : နေနဲ.့လ…
Property ID: S-1142567
Asking Price : 2,050 သိန်း
Office no : 097 888 80 800
ရောင်းရန် - အမှတ်(၂၁။၂၃)။ ဗိုလ်တစ်ထောင်လမ်းသွယ်(၃)တွင် အခန်းဖွဲ့ပြီး…
အခန်းတစ်ခန်းဖွဲ့ပြီး ရေချိုးခန်းအိမ်သာ ကြွေပြားခင်း ကပ်ထားပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်...
အခန်းတစ်ခန်းဖွဲ့ပြီး ရေချိုးခန်းအိမ်သာ ကြွေပြားခင်း ကပ်ထားပြီး အသင့်နေနိုင်ပါသည်
Property ID: S-1142676
ရောင်းရန် - ဗဟန်းမြို့နယ် သံလွင်လမ်းမတွင်41/2 Rc လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။
Listed 19 August 2019
Mon Mon Zin Hlaing
Advertiser : Mon Mon Zin Hlaing
Property ID: S-1203812
Asking Price : 30,000 သိန်း
Mobile : 09956454062, 09422656428, 09767096453
Office no : 01500219 , 012304268, 012305704, 095096876
ရောင်းရန် - Botahtaung Zay Street (ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း)
*Location – Botahtaung Zay Street , Botahtaung Town ship. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Condo (Lift) *Area — 1334 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , 2-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathrooms and ready to live located at Bo ta htaung Town…...
*Location – Botahtaung Zay Street , Botahtaung Town ship. *Price – 1000 Lakhs *Property Type — Condo (Lift) *Area — 1334 sqft *Rooms formation - 2-bedrooms , 2-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathrooms and ready to live located at Bo ta htaung Town…
Listed 17 August 2019
Botahtaung Zay Street (ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်း)
Property ID: S-1204262
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းမရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku…
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းမရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------------------------- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊…...
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရာဇဓိရာဇ်လမ်းမရှိရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း(Malihku Real Estate) -------------------------------------------------------------------------- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊…
Listed 14 August 2019
Property ID: S-1191131
Asking Price : 880 သိန်း
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၉လမ်းရှိရောင်း/ငှားရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း…
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၉လမ်းရှိရောင်း/ငှားရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate) ----------------------------------------------------------------------- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊…...
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၉လမ်းရှိရောင်း/ငှားရှိသောကွန်ဒိုတိုက်ခန်း (Malihku Real Estate) ----------------------------------------------------------------------- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊…
Listed 8 August 2019
Property ID: S-1203911
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ် လမ်း50 ရှိ ကွန်ဒို အလွှာမြင့် အခန်းကျယ်…
Size - 26x 50 ' / အိပ်ခန်း - MBR -1 ခန်း / SBR -1 ခန်း / အဲ ယားကွန်း -3 လုံး / တအိမ်လုံး ပါကေးခင်းထား / မျက်နှာကျက်အလှဆင်ထား / မီးဖိုဆောင်…...
Size - 26x 50 ' / အိပ်ခန်း - MBR -1 ခန်း / SBR -1 ခန်း / အဲ ယားကွန်း -3 လုံး / တအိမ်လုံး ပါကေးခင်းထား / မျက်နှာကျက်အလှဆင်ထား / မီးဖိုဆောင်…
Listed7August 2019
Property ID: S-1203844
ရောင်းရန် - 49 Street (၄၉ လမ်း)
*Location – 49 Street , Botahtaung Town ship. *Price – 2000 Lakhs *Property Type — Condo (Lift ) *Area — 1500 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , 4-Aircon, Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship....
*Location – 49 Street , Botahtaung Town ship. *Price – 2000 Lakhs *Property Type — Condo (Lift ) *Area — 1500 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , 4-Aircon, Living room and Kitchen. *Other Features — Parquet , 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship.
Listed5August 2019
49 Street (၄၉လမ်း)
Property ID: S-1203715
ရောင်းရန် - 50-Street (လမ်း၅၀)
*Location – 50-Street , Botahtaung Town ship. *Price – 1150 Lakhs *Property Type — Apartment (1F ) *Area — 1100 sqft *Rooms formation — 1-Bedroom , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship....
*Location – 50-Street , Botahtaung Town ship. *Price – 1150 Lakhs *Property Type — Apartment (1F ) *Area — 1100 sqft *Rooms formation — 1-Bedroom , Living room and Kitchen. *Other Features — Laminate , 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship.
Listed 31 July 2019
Property ID: S-1203508
Asking Price : 1,150 သိန်း
ရောင်းရန် - Kanner Road (ကမ်းနားလမ်း)
*Location – Kanna Road , Botahtaung Town ship. *Price – 800 Lakhs *Property Type — Apartment (5F ) *Area — 1000 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , Ph , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — ceramic, 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship....
*Location – Kanna Road , Botahtaung Town ship. *Price – 800 Lakhs *Property Type — Apartment (5F ) *Area — 1000 sqft *Rooms formation — 2-Bedrooms , Ph , 1-Aircon , Living room and Kitchen. *Other Features — ceramic, 1-Bathroom and ready to live located at Botahtaung Town ship.
Kanner Road (ကမ်းနားလမ်း)
Property ID: S-1203507
ရောင်းရန် - ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း မြေညီထပ်အပေါ် ဘလောက်ကွန်ဒို၊ (၂၅x၆၀)ပေ
ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း
ကြွေခင်း,လုပ်ငန်းရ,ထပ်ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Transformer...
ကြွေခင်း,လုပ်ငန်းရ,ထပ်ခိုး,Overhead Tank,Own Meter,Transformer
Listed 28 July 2019
Advertiser : Myint Lwin
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း အပေါ် ဘလောက်
Property ID: S-1203435
Asking Price : 8,000 သိန်း
Office no : 09 250 50 8125
ရောင်းရန် - ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း အပေါ် ဘလောက်ကွန်ဒို၊ (၂၅x၆၀)ပေ
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Transformer,Backup Generator For…...
အသင့်နေ,ပါကေးခင်း,Master Bedroom,Overhead Tank,Own Meter,Transformer,Backup Generator For…
Property ID: S-1203434
ရောင်းရန် - ၄၉ လမ်း အပေါ် ဘလောက် ကွန်ဒို (1500)Sqft
၄၉ လမ်း အပေါ် ဘလောက်
Property ID: S-1203433
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီးရှိရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku…
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီးရှိရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku Real Estate) ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီး…...
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီးရှိရောင်းရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်(Malihku Real Estate) ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားအနီး…
Listed 15 July 2019
Property ID: S-1202797
Asking Price : 10,000 သိန်း
ရောင်းရန် - ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပြီးတိုက်ခန်းကျယ်ရောင်းရန်ရှိပါသည်
Shwe Htake Tann
Advertiser : Shwe Htake Tann
Property ID: S-1201508
Mobile : 09799894395
Office no : 09420010411, 09253988690, 09799894395
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် property များအလုံ ရှိ ရောင်းရန် Real Estate
အလုံရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဗဟန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဗိုလ်တထောင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကိုကိုးကျွန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒလရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဒေါပုံရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
လှိုင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များလှိုင်သာယာရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များလှည်းကူးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များမှော်ဘီရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များထန်းတပင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များအင်းစိန်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကမာရွတ်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကော့မှုးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များခရမ်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကွမ်းခြံကုန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကျောက်တံတားရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များကျောက်တန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ကြည့်မြင်တိုင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များလမ်းမတော်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များလသာရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များမရမ်းကုန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များမင်္ဂလာဒုံရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များမင်္ဂလာတောင်ညွှန့်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များမြောက်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များပန်းပဲတန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များပုဇွန်တောင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များစမ်းချောင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဆိပ်ကြီးခနောင်တိုရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များဆိပ်ကမ်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
ရွှေပြည်သာရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များတောင်ဥက္ကလာရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များတိုက်ကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များတာမွေရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များသာကေတရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များသံလျင်ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များသင်္ဃန်းကျွန်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များသုံးခွရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များတွံတေးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များရန်ကင်းရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များရွှေပေါက်ကံရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ အလုံ ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများအလုံ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များအလုံ ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
အလုံ ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေအလုံ ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်
All Property types, for sale in Botahtaung , Yangon